DIA inodonha zvinopfuura makumi mana muzana mumusika wekutengesa | Ehupfumi Zvemari
DIA inodonha zvinopfuura makumi mana muzana mumusika wemasheya
Imwe yemaitiro akakosha kwazvo emari dzenyika dzakadai seDIA yadonha pamusika wemasheya uye yawira mukati zvishoma zvishoma kupfuura 30%. Iyo yakasimba kwazvo muzana uye izvo zvakakonzera kutya kwechikamu chakanaka chevashambadzi vayo, pamberi pekutya kwavo kuti kambani inogona kudzikisira zvakatowanda panguva inotevera yekutengesa zvikamu. Iyo yakagadzirirwa seimwe yeiyo dzakanyorwa makambani protagonist yemusika unoramba uripo muvhiki yakaoma kwazvo yemisika yemari. Mushure mekudonha kwakapinza kwakaitwa muzvikamu zvichangoburwa uye izvo zvakatungamira Ibex 35 kutengeserana pazasi kwazvo mumakore maviri apfuura, pazasi pe9.000 poindi.
DIA yadonha nekusimba kwakadai semhedzisiro ye purofiti yambiro mairi zvichiziviswa kuti ichatema fungidziro dzayo mukati megore rino remari. Iko keteni yekugovera chikafu inoshuma kuti ayo ekushandisa mhedzisiro (ebitda) ye2018 ichave "iri pakati pakati pe350 ne400 mamirioni euros", zvichienzaniswa ne568 mamirioni egore rapfuura. Mune mamwe mazwi, mune yakanakisa kesi mamiriro, zvinoreva kuti 30% inodonhedza pamusoro pegore rino. Sezvo zvine musoro, idzi dhata dzaita kuti varimari vadiki nevepakati vanyanye kushata, avo vakabuda mukukosha muhuwandu mukutarisana nezvingaitika kubva zvino zvichienda mberi,
Izvo hazvigone kukanganikwa kuti DIA kusvika nguva pfupi yadarika yaive imwe yenzvimbo dzakachengetedzwa zvakanyanya muzvivakwa zvemunyika, nemafambiro makuru mazuva ese. Kwakawana mutengo wayo mubhendi pakati pe5 ne7 euros pamugove uye yakatozove imwe yeanonyanya kukoshesa kukosha muiyo benchmark index yeSpanish stock stock. Nekudaro, zvese izvi zvakatadza kufamba apo fungidziro dzayo dzebhizimusi hadzina kuzadzikiswa uye zvakabva pane yakajeka kumusoro kuenda kune yakaderera maitiro ayo aripo iye zvino
1 ZUVA: mishumo yakaipa
2 Yakadhura mutengo yakatemwa
3 Enda kubva ku2 kusvika ku1 chete euro muzuva rimwe
4 Pasina chikamu mu2019
5 Kuvapo muArgentina
ZUVA: mishumo yakaipa
Ichokwadi ndechekuti zvese zvinouya kubva kuna JP Morgan achiburitsa mushumo wakashata uye kucheka kukosha kwekambani kubva pamutengo wakanangwa we2,1 euros pamugove kusvika pa1,7. Nekurudziro yakajeka ye kushaya huremu, kana chii chakafanana, bvisa zvigaro muiyi kukosha kwakakosha kusvika makore mashoma apfuura. Mupfungwa iyi, zvinofanirwa kuyeukwa kuti kambani yekugovera yakasiya isingasviki pasi pe68% yeiyo kukosha kusvika zvino gore rino. Iko musika capitalization inoramba iri pasi pe800 mamirioni euros uye ndeimwe yemakambani ane kuderera kwakanyanya muzvikamu zveSpanish.
Zvese izvi zvine matambudziko mukutungamira kwekambani kubva zvakaziviswa nemutungamiri wenyika izvo Ini ndaizosiya hofisi mu2019, kunyangwe ari muchinyorwa chinodzidzisa anofambira mberi nechiyero ichi nekusiya basa "nhasi." Ichi chiitiko chekambani chakakonzera kusagadzikana pakati pevatengesi vakasarudza kutengesa kwavo kuchengetedzeka, vachitya kuti kudzikira kwacho kunogona kuwedzera mumazuva anotevera. Iko iko ikozvino kutengesa kuri kuzviisa pachayo nekujeka kukuru pane zvekutenga zvinangwa zvisiri vashoma.
Yakadhura mutengo yakatemwa
Mushure mekutaura pamusoro apa 5 euros pamugove, chokwadi ndechekuti panguva ino kukosha kwayo kwakadzika zvakanyanya. Nekuti zvirizvo, yakatungamira kuti itengese pane yayo epashure, kunyanya pamatanho e1,27 euros mushure mekunge kambani yatumira chiitiko chataurwa pamusoro apa kuCNMV umo kambani inoburitsa pachena fembera zvawanikwa pachiitwa ichi chazvino. Ehe hapana chinhu chakanaka uye icho chakagadzira kuti zvikamu zveDIA zviri kuva mumwe wevatsigiri vezvikamu zvepamusika wemasheya, uye pamusoro pehumwe hunhu hwekukosha kwakakosha mune yakasarudzika Spanish index.
Yambiro kukambani iyi yakabata zvinhu zviviri izvo zvakakosha kwazvo kune vese varairidzi nevamiriri vemari. Kune rimwe divi, mari mhedzisiro uye kune imwe kune chikamu chechikamu chayo chakakosha uye izvo zvakagadzira kuti iyo kukosha haina kukwanisa kubata zvigaro zvayo uye yadonha pazasi peeuro nehafu mushure memakore mazhinji. Mukuti kwaifamba nemumatanho akawanda anogutsa kune vese vanhu vaive mukati meiyi kukosha ikozvino vakadzikiswa. Neimwe yemaitiro akaipisisa ekuenzana kweSpanish uye yakafanana chaizvo nezvinoitwa izvo zvinonzi kuchengetedzeka kwekufungidzira.
Enda kubva ku2 kusvika ku1 chete euro muzuva rimwe
Kune rimwe divi, chokwadi chekuti masheya akarasikirwa neinenge hafu kukosha kwavo mumisika mune imwechete yekutengesa haigone kukanganikwa futi. Izvi zvakaitika uyu Muvhuro wapfuura, sezvo DIA yakavhurwa nemutengo uri padhuze ne2 euros kuenda zvishoma zvishoma kurasikirwa kukosha uye pakupedzisira padyo nechimwe chinhu chinopfuura yuniti yuni Mune mamwe mazwi, iko kuderera kweanosvika makumi mana muzana, mune chimwe chezvikamu zvine hukasha, nekuda kwekukwira kwemapopoma, mumakore achangopfuura mune yakasarudzika indekisi yeSpanish equities. Iko kunenge vese vabati vezviito vaida kubuda munzvimbo dzisati yambiro yenyaya iyi nyowani.
Kunyangwe chokwadi chiri chekuti kambani yekuparadzira yekutengesa inoramba ichiwana purofiti, asi inogona kuremerwa zvakanyanya nekutengesa online yekutengesa iri kuisa zano rayo kune vatengi veSpanish. Semhedzisiro yemaitiro aya, hapana munhu anoda kuve mune bhizinesi ane hunhu uhu. Sezvazvakaitika nguva pfupi yadarika muUnited States, uko kambani yekuparadzira yakabva pamadhora zana nemakumi masere kusvika pamasendi mashoma nekuda kwenzvimbo yepamusoro yechikwereti. Asi pamusoro pezvose nekuda kwemakwikwi makuru kubva kumakambani matsva ekushambadzira. Inogonawo kusvika kuSpain, anodaro vamwe vevatengesi.
Pasina chikamu mu2019
Chimwe chinhu chakasarudzira varimi kuti vatore nzvimbo yavo yekubuda mumutengo inyaya yekuti kambani yakazivisawo kuti vagovana navo kwete achagamuchira chikamu Chinhu icho pasina mubvunzo chinokanganisa zvakanyanya kukosha kubva panguva yacho payakagovera mubairo pamwe neyakagadziriswa uye yegore pundutso ingangoita 2019%. Seimwe yeakanyanya kukurudzira ekupinda mukutenga kuburikidza nezviito zvavo. Kuve, mune chero mamiriro ezvinhu, imwe yepamusoro-soro muchikamu chayo uye padyo neiyo inogoverwa nemigwagwa mikuru kana nemakambani emagetsi kana emagetsi ivo pachavo.
Kune rimwe divi, iro boka rinoti iyi yekudzokorora kune "kudonha muhuwandu hwekutengesa" uye pamusoro pezvese "kuwedzera kwemashandisirwo emashandisirwo", zviviri zvezvinhu zvave zvichiranga zvakanyanya kwemwedzi yakati wandei. Kubva ku5 kana 6 euros iyo yaive yakanyorwa muna 2015 na2016, kwaive imwe yemabheti emusika wemasheya nevanoongorora zvemari vanonyanya kukosha. Iko kwake tenga kurudziro kuumba yakagadzikana manejimendi portfolio yepakati nepakati yakareba. Chinhu chakadzikira mumaawa mashoma kwazvo.
Pasina mubvunzo, mamiriro ezvinhu ari kubuda misika ari kuenda panguva ino chimwe chinhu chakatamba pamusoro pavo. Nekuti mukuita, mukati mekufanotaura kwayo, haina kufunga nezve accounting accounting kureva misika, inokanganiswa ne hyperinflation. Semuenzaniso, kuburikidza nekuwedzera kwayo kushomeka mumusika weArgentina uye kuti panguva ino haisi panguva yakanakisa mushure meratambudziko rakakomba rehupfumi. Iko kune chimwe chezvikamu chinoonekera zvakanyanya kuti iri kukanganisa sei mari yayo, iyo peso yeArgentina.
Beyond kumwe kufunga kwehunyanzvi uye pamwe kunyangwe kubva pakakosha maonero, DIA migove inogona kudzika mumutengo wayo. Hazvishamise kuti huwandu hwakanaka hwevanoongorora zvemari vanoona iwo mutengo wawo haasati arova pasi futi. Ichi chinhu chingatsanangure kusimuka kukuru kwevatengesi mumaawa mashoma ekutengesa. Kunyangwe vazhinji vacho vachinongedzerawo kuchokwadi chekuti chirango chave chisingaenzaniswi zvichienderana nemamiriro avo ebhizinesi. Naizvozvo, chaiwo rebound mumazuva anouya haigone kutongwa kunze kana, kunyangwe iyo ingaite musungo wevashambadzi vasina hunyanzvi murudzi urwu rwekutengesa pamusika wemasheya.
Chero zvazvingaitika, chenjedzo inofanirwa kuve dhinomineta mune zvese zviito zvevashambadzi vadiki nepakati. Nekuti iko kuchengetedzeka nhasi kune yakawanda njodzi, chimwe chinhu chaive chisingafungidzirwe mwedzi mishoma yapfuura. Pane kupokana, unogona kuve mukana wekutenga wevashandisi vanofungidzira kana vane hukasha kana vakatungamira mashandiro avo kune yepakati nepakati refu. Kunyangwe zvatova zvakaoma kusvika pamitengo yezuro, pakati pezvimwe zvikonzero nekuti maakaundi avo akachinja zvakanyanya.
Iko kwake tenga kurudziro kuumba yakagadzikana manejimendi portfolio yepakati nepakati yakareba. Chinhu chakadzikira mumaawa mashoma kwazvo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » DIA inodonha zvinopfuura makumi mana muzana mumusika wemasheya
Ndakaedza kumahombekombe masevhisi uye ndinogona kukuudza iwe uri shamwari dzakanaka. Ndinokukoka kuti uzviedze. Ndakazviita nekambani yeSin Impuesto uye zvakandiitira zvakanaka kwazvo. Iyo yakazvipira kambani uye vanoshanda kuti isu tione mhedzisiro kamwechete (investments, kuita bhizimusi online, kuchengetedza zvinhu zvedu nemasevhisi, kuwana yakakwira mhindu ...) Ini ndinokurudzira nemoyo wese aya masevhisi kwauri.
Mabhajeti anodzvinyirira yeSpanish stock stock